Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » UKhenketho lwaseKerala: Coca iPali yaseChaliyar Paddle ngoku
Ukhenketho lokuzonwabisa • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • Xanduva • News Sustainability • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Isiganeko saseKerala Paddle
Ushicilelo lwe-7 lwe-Chaliyar River Paddle luya kubanjelwa eKerala, eIndiya, ukusuka nge-12 ukuya kwi-14 kaNovemba ngo-2021, kunye nomyalezo othi "iplastiki ingalunganga."
Umnyhadala weentsuku ezintathu wokubheqa ngesikhephe oququzelelwe yiJellyfish Watersports ngokubambisana noKhenketho lwaseKerala ukhuthaza amava e-eco-friendly e-waterports adibanisa abantu abancinci kunye nabantu abadala.
I-paddle ye-68-km iya kuqala ukusuka eNilambur, emi emazantsi enduli yeNtshona ghats eMalappuram.
Iya kugqitywa eBeypore kwisithili saseKozhikode, apho umlambo udibana noLwandle lwaseArabia.
Iiprotokholi zokhuselo ze-COVID ziya kulandelwa kuwo wonke lo msitho kwaye isatifikethi sokugonya se-COVID siyimfuneko yokuthatha inxaxheba kulo msitho. Kulo nyaka, ngenxa yale meko, lo msitho uza kukhuthazwa njengomnyhadala we-phoenix wokunyusa imisebenzi yezokhenketho eKerala. Umsitho uza kubonelela ngohambo, inkampu, kunye nomthombo wolwazi lokuhamba ngesikhephe elwandle, usebenzisa i-kayaks, ii-SUPs, iirifts, kwaye kulo nyaka ngomhla wesithathu, abaququzeleli bazisa ukurhuqa (ababheqi) kunye neenqanawa zokuhamba ngeenqanawa ezenza uluhlu olubanzi izixhobo zamanzi ezingasebenzisi-moto, ezisebenzisa amandla abantu ezisetyenzisiweyo-into entsha ekufuneka ujonge kuyo kwaye ube namava ayo.
Umlambo iChaliyar Paddle ubonelela ngamathuba kumanqanaba ngamanqanaba ukusuka kwabaqalayo ukuya kwabangadadiyo ukuya kubathandi bezemidlalo bamanzi, abathandi bendalo, abakhenkethi, abantwana kunye nabantu abavela kuzo zonke iinkalo zobomi. Umnyhadala ngokwendalo ukhuthaza imilambo yaseKerala, ubuhle babo, ukutya okwenyani kweMalabar, kwaye inika ithuba elikhethekileyo lokudibana nabantu abathanda izinto ezifanayo. Iqela lomculo wasekhaya liza kujoyina izandla ukukhuthaza italente yabo kwaye banike ingokuhlwa yokuphumla kubakhweli. Ukutya kuya kulungiselelwa zezona ndawo zokutyela zibalaseleyo zaseCalicut Paragon.
“I-Chaliyar River Paddle ijolise ekugcineni imilambo yethu kungcoliseko lwedolophu kunye nokukhuthaza ukuzonwabisa ngolwandle kuye wonke umntu. Ngumcimbi weplastikhi ongalunganga, kungoko ababhexeshi baya kunceda ukucoca umlambo ngelixa behamba ngephenyane. Sisebenzisane ne-NGO yengingqi eza kuthi inike abathathi-nxaxheba ingxowa yokuqokelela kwaye bathathe inkunkuma bayise kwindawo yabo yokuphinda isetyenziswe kunye nolawulo lwenkunkuma. Kananjalo baya kufundisa abathathi-nxaxheba ngokwahlula ngokufanelekileyo, ukusetyenziswa ngokufanelekileyo, kunye nolawulo lwenkunkuma. Imalunga nokufumana i- Ukhenketho lwaseKerala Icandelo ukubuya kubhubhane we-COVID kunye nokusasaza ulwazi malunga nokusingqongileyo ngakumbi ukungcola kweplastiki okugcweleyo emlanjeni, utshilo uKaushiq Kodithodika, uMseki weJellyfish Water Sports.
Ulwazi oluthe kratya, kubandakanya ulwazi lobhaliso lomsitho, lunokufunyanwa Apha.